Ungaphuma njani kwi-Twitter kwi-PC? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungaphuma njani ngaphandle kwe-twitter kwi-pc?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 374
Ukuphuma kwiakhawunti yakho ye-twitter kulula njengokucofa nje okulula eqongeni, nangaphezulu, ukuyenza ukusuka kwidesktop ye-twitter.
I-Twitter ibonakaliswe ngokunikezela ujongano olulula kakhulu, kunye neempawu ezoneleyo zomsebenzisi ukuze aphile ngamava kude neenkqubo ezinzima zabanye amaphepha, ngakumbi iphepha elisebenza njengonxibelelwano lwasentlalweni.
Uhlaziyo ngalunye lwe-twitter luphumeze izinto ezintsha kwaye lususa ezinye Ixesha elingaphezulu, i-twitter inikeze amandla okuthumela abalinganiswa abaninzi kwii-tweets, kodwa ikwamisa amandla okudibanisa iakhawunti yakho nezinye iinethiwekhi.
Izizathu zokuphuma ngaphandle
Kukho izizathu ezininzi ezinokukhokelela ekubeni uphume kwiakhawunti yakho:
Ukunika ixesha kwiinethiwekhi zentlalo kuhlala kubalulekile, ngakumbi kula maxesha, ngokuhamba rhoqo kweendaba ezidimazayo ezikhula mihla le. Ihlala ilungile kuzinzo lomntu kwengqondo.
2.- Ukungena ngemvume kwisixhobo somnye umntu. Ngexesha elithile uya kuba nesidingo sokwenza njalo, ke kufuneka uqinisekise ukuba akukho rekhodi iseleyo kwisixhobo.
Inkqubo yokuvala i-akhawunti yenziwa ngothotho lwamanyathelo alula:
1.- Ngena kwiqonga le-twitter ngeyakho umsebenzisi kunye negama lokugqitha.
2.- Xa ufaka iakhawunti yakho, uya kubona ujongano lwe-twitter nazo zonke izinto zalo. Umda wexesha, icandelo lokubhala i-tweet. Kwicala lasekunene uyakubona imeko yosuku, iingcebiso zabalandeli kunye nebhokisi yokubhala imiyalezo ngqo.
3.- Kwicala lasekhohlo uya kufumana imenyu yezinto ezinazo iiakhawunti ze-twitter. Iimpawu apha zisuka "ekhaya" ziye "kwiprofayili."
4.- Yiya emazantsi kweli cala, apho kuvela umfanekiso wakho weprofayile. Kuya kufuneka ucinezele i-ellipsis icon ecaleni kwegama lakho lomsebenzisi. Ngokukhawuleza emva kokwenza njalo, i-tab eneendlela ezimbini ziya kubonakala.
5.- "Yongeza iakhawunti esele ikho" kwaye "iseshoni yokuvala" iya kuvela njengokukhetha. Khetha yesibini. Ngokwenza njalo, isaziso siya kuvela kumbindi wephepha kunye nezinye iindlela ezimbini onokukhetha kuzo. Rhoxisa kwaye uphume.
6.- Ukugqiba inkqubo, cofa kwiseshoni yokuvala. Ngokukhawuleza emva koko, iphepha liya kuhlaziya ukubonisa iibhokisi zokungena kwi-interface yayo ephambili.
Ezinye izinto ekubonelelwa ngazo yi-twitter
Ungangena kwiakhawunti yakho nangaliphi na ixesha, ukuba kufuneka njalo. Ukwenza oku, kwanele ukuba negama lakho lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo.
Kwelinye icala, i-twitter ikwazisa ukuba ngaphambi kokuvala intengiso, ungongeza ezinye iiakhawunti kwiqonga. Ngaphambi nje kokuvala, "yongeza iakhawunti esele ikho" ukhetho luya kukuvumela ukuba wenze ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
Uya kufuna kuphela i-imeyile yesibini kunye negama lokugqitha. Abo ubukade ubhalisa le akhawunti intsha.
1 Izizathu zokuphuma ngaphandle
2 Inkqubo yokuvala
3 Ezinye izinto ekubonelelwa ngazo yi-twitter
Ungayisusa njani iTelegram?
Ndingathanda ukubeka iifilitha kwiifoto zam ze-Instagram, ndingazifaka njani izihluzo?